Frank Lampard oo sheegay mudada uu N’Golo Kanté ka maqnaanayo safka kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 21 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa ku dhawaaqay mudada uu N’Golo Kanté ka maqnaanayo garoomada, kaddib markii lagu sameeyay dhowr jeer baaritaano caafimaad ee la xiriira dhaawaca soo gaaray.
N’Golo Kanté ayaa isaga baxay bilawga kulankii ay la ciyaareen Manchester United ee horyaalka Premier League, kaasoo ay Blues guuldarro la kulantay, xiddiga reer France ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka maqnaa tababarka kooxda.
Haddaba Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa wuxuu xaqiijiyay maanta oo Jimco ah in N’Golo Kanté uu garoomada ka maqnaan doono mudo dhan saddex toddobaad.
Sidoo kale Tammy Abraham ayaa halis ugu jira inuu seego kulanka soo aadan ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, inkastoo uu 70% uu ka qeyb qaatay tababarka.
Yeelkeede, Frank Lampard oo ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka London derby oo ay barri wada ciyaari doonaan kooxaha Chelsea iyo Tottenham Hotspur ayaa wuxuu sheegay:
“N’Golo Kanté weli diyaar ma ahan, wali wuxuu la dhibtoonayaa dhaawac dhanka muruqa ah, wuxuuna maqnaan doonaa seddex isbuuc, waa dhaawac la mid ah kii ka soo gaaray kulankii Arsenal” ayuu yiri Frank Lampard.